ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ပင်စင်ယူတဲ့အခါ…”
ဝါသနာတော့တူတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာစိုက်စိုက် တခါမှ မဖြစ်ထွန်းဘူး။ ကျန်တာတော့ ဘာပြောရမှန်းမသိတော့ဘူး။ :) Thanks for your visiting to my blog. :D
ခုတော့ farmville မှာပဲ စိုက်နေရတယ်။ ခုထဲက ကျင့်ထားတာ နောင်တစ်ကယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့ခါ အထောက်ကူများပြုတန်ကောင်းပါရဲ့။
အိုအေ လယ်က တခုတည်းထင်လို့လား။ ၃ ခုတောင်စိုက်တာ။ စားသောက်ဆိုင်ကလဲ ၂ ဆိုင်။ အဲလို စီးပွားရေးသောင်းကျန်းနေတာ ကိုပေါရေ..
ကိုပေါလိုပဲ ကိုယ့်မွေးမြေ ပုသိမ်မှာပဲ ဘ၀နေ၀င်ချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးချင်ပါတယ်။
ိကိုပေါပင်စင်ယူပီး မြေအကွက်ချ အပင်စိုက်ပီး လောက်တဲ့အချိန် ဆို လာလည်ဖို့ ဖိတ်ပါ။ မရောက်ရောက်အောင်လာလည်ပါ့မယ်.. အခုတော့ Farm town ထဲမှာဘဲ... စိတ်အဆာ ဖြေလိုက်ပါအုံးမယ်.. ဟီးးးးး
ထင်သလိုမဟုတ်ပဲ တခြားစီ ဆိုရင်ကောဗျာ....
ဒီအလုပ်မျိုးတွေကတော့ တွေးကြည့်လိုက် ပျော်ကြည့်လိုက်ကြီးဗျနော်.... ဟားဟား
ကျနော်က ဖန်းတောင်း စိုက်နေတား) တချိန်ချိန်တော့ မွေးမြေရပ်ကိုပြန်ပြီး အေးဆေး နေချင်ပါတယ် အကိုရေ
မနေ့က မစ္စတာ လီရှန်းလွန်း NTU မှာ ပြောသွားတဲ့အကြောင်း ပို့စ်တင်မယ်ထင်နေတာ...
ဒါလည်း ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်... အိမ်က အဖေနဲ့ အမေလည်း ကိုပေါနဲ့ အကြံတူတယ်... သွားမယ်ဆိုပြောနော်... အဖေလည်း နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး လူမှုရေး ဘာရေး ညာရေး တော်တော်စုံတယ် .. လေပေါဖော်ရတာပေါ့.. :P
ခြံနီးချင်း ဖြစ်ချင်လို့ပါ ။ :P
မဒမ်ပေါ အိမ်က လှလိုက်တာ
အနော့်အိမ်ကတော့ အကောင်တွေ သစ်ပင်တွေ နေရာမချနိုင်ပဲ ပွရှုပ်နေတာပဲ.. သွားလည်း မသွားဖြစ်တော့ဘူး..။
အနော်တို့ တော့ ပင်စင်ယူပြီးမှ နိုင်ငံခြားထွက်နိုင်မှာ။ ပြောင်းပြန်ပဲနော်။
သူကိုယ်တိုင်ကျ ၀ါသနာ မပါသယောင် ရေးသွားတာ ဖတ်ရတော့ အသည်းက ကျလိကျလိနဲ့ ...
Farmville ထက်စာရင် Farm Town က ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသလို လက်တွေ့ ပိုကျတယ်။
ကိုယ့်လယ်မှာ ဘာမှ လုပ်စရာ မရှိရင် သူများလယ်မှာ လုပ်အားခရအောင် သွားလုပ်လို့ ရသလို ကိုယ့်လယ်မှာ ခိုင်းစရာရှိတာကိုလည်း သူများကို တပြားမှ မပေးရဘဲ ခိုင်းလို့ ရတယ်။ သူများလည်း ပိုက်ဆံရ၊ ကိုယ်လည်း အလုပ်ရှုပ်သက်သာ။ အလုပ်လိုချင်၊ အလုပ်သမား ငှားချင်ရင် ဈေးသွားရုံပဲ။
ကျွန်တော်တော့ နည်းနည်းစွဲချင်နေလို့ ပြန်လျှော့နေရတယ်။
လယ်စိုက်ရင်း စိတ်ပျော်ကြပါစေ ...
သစ်ပင်စိုက်ချင်တာများ ကိုပေါရာ စင်္ကာပူမှာ နေရောပေါ့။ ကိုယ့်အခန်းနှင်. အိုးမကွာ အခန်းမကွာ စိုက်လို့ ရတယ်လေ။ အပင်အိုးထဲ ရေ၀ပ်တာတော့ သတိထားပေါ့။ တော်ကြာ ဒဏ်ရိုက်ခံရအုံးမယ်။
အပင်စိုက်ရင်ခြံချင်းကပ်ရပ်ဝယ်မယ်နော်.. အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူနားနေတော့ကောင်းတာပေါ့.. တော်တော်စိုက်တတ်ပျိုးတတ်နေပီလား.. Facebook ထဲမှာ..:D
ွှအဟေဟေ့.... ငဒို့ရွာစားတွေကတော့ ပင်စင်ယူရလောက်အောင် အသက်မကြီးသေးပေမယ့် ကိုယ့်ဘာသာ ပင်စင်ပေးပြီး အထဲပြန်ပြီး အပင်စိုက်နေတယ် ကိုပေါရေ... ခရမ်းချဉ် ၊ ခရမ်း ၊ တိုင်ထောင်ပဲ ၊ ရုံးပတီ ၊ ချဉ်ပေါင် ၊ ငြုပ် ၊ ပင်စိမ်း ၊ ရွှေဖယုံ ၊ ဘူး စုံလို့ပဲ ဗျို့ ။ စားတန် စား ၊ အိမ်နီးပါးချင်းလက်ဆောင်ပေးတန်ပေး ၊ ရောင်းတန် ရောင်းပေါ့ဗျာ ။ ပိုက်ဆံ သိပ်မရ ပေမယ့် ကိုယ်စိုက်ပျိုးတဲ့ အပင်က အသီးအပွင့်တွေ မြင်ရတာနဲ့တင် အတော် စိတ်ချမ်းသာတယ်ဗျို့.... ဒါပေမယ့် အပင်စိုက်တယ်ဆိုတာ နည်းနည်းတော့ အညစ်အပေ ၊ အပင်အပန်းခံနိုင်မှ ရတာမျိုးနော် ။ အွန်လိုင်းမှာ စိုက်သလိုတော့ လွယ်မယ် မထင်နဲ့ ကိုပေါရေ... ကျန်းမာ ပါစေဗျာ ....
please can i add u in farm ville ?? need more neighbour .. lol :P